माइकल Stelzner का लेखहरूमा Martech Zone |
द्वारा लेखहरू माइकल Stelzner
अविश्वसनीय रूपमा सफल ब्ल्गिंग सफलता शिखर सम्मेलन को ताजा को ताजा, सामाजिक मीडिया परीक्षकले सामाजिक मिडिया सफलता शिखर सम्मेलन शुरू गर्दैछ! के तपाई सोशल मिडिया साइटहरु जस्तै फेसबुक र ट्विटर को उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईले आशा गर्नुभएको परिणामहरू पाउनु भएको छैन? के तपाईं केहि मार्गदर्शन र ताजा विचारहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? हो, सामाजिक मिडिया को प्रतिज्ञा कडा छ: ग्राहकहरु र सम्भाव्यहरु संग प्रत्यक्ष सम्पर्क जो पहिले पहुँच योग्य थिएन। यसको मतलब अधिक एक्सपोजर, बढेको ट्राफिक र अधिक व्यापारिक अवसर - सबै